रबि लामिछानेको तस्बिर भाईरल खास कुरा के हो ? रबिले पारे स्पष्ट
हिजो आज फेरि नेपालमा कोरोना संक्रमित पहिले भन्दा केही बढी देखिदै गएको छ । काठमाडौ लगायत अन्य ठाउँ मा लकडाउन खोकुलो भए लगतै कोरोना संक्रमित धेरै देखिएको छ । यसै समय मा आज संचार कर्मी रबि लामिछानेको तस्बिर एकाएक सामाजिक संजाल मा भाईरल भएको छ । त्यो तस्बिर मा केही मानिस को बिचमा केही खादै छन ।
त्यो तस्बिर भाईरल भए लगतै रबि लामिछानेले आफ्नो फेसबुक मार्फत आफ्नो कुरा स्पष्ट दिएका छन । हामिले संचार कर्मी रबि लामिछाने ले उनको फेसबुक मा लेखिएको खास कुरा के हो ? जस्ताको तेस्तै देखाउने छौ साथै सामाजिक संजाल मा भाईरल भएको यो फोटो हेर्नुहोस । संचार कर्मी रबि लामिछाने ले लेखेको कुरा जस्ताको तेस्तै:-
खाना खाएको फोटोमा चर्चा चलेछ । पार्टी गरेको होइन,रमझमपनि होइन, सार्वजनिक स्थानमा भिड्भाड जम्मा गरेको पनि होइन।अत्यन्त सजग र सचेत हुँदै चिने जानेका साथीहरूको आग्रहमा,महत्त्वपूर्ण सल्लाह र छलफल सके पछि घर भित्रै ६/८ जना मात्रै भएको स्थानमा पाकेको/पकाएको खाना खाएका हौ ।
हामीले आफ्नो घरमा कसैलाई बोलाएर भोज,भतेर वा जमघट गरेका होइनौ । काम पछि, छलफल सकिए पछिको सामान्य खाना हो,साथीले श्रद्दाले पस्केर दिएको खाना । रमाइला साथीहरू भेट्दा र फोटो खिच्दा २ इन्ची बढी जरुर हासियो,गल्ती चाहिँ आवश्यक दुरि कायम गरिएन । भएको चाहिँ यत्ति हो । अस्तिबाट संक्रमितको संख्या बढेपछी हिजो कै कार्यक्रममा आफ्नै आलोचना गरेको छु ।
लकडाउनको शुरूवातका दिनमा जस्तो होसियार भैएन, हेलचेक्राइ गरियो,आज बाट म त सचेत हुन्छु तपाइ पनि सजग हुनुहोस् भनेको छु । सायद जसलाई माया गरिन्छ उसै बाट अपेक्षा गरिन्छ त्यसैले अन्यथा पटक्कै लिएको छैन । सबै आलोचनाहरुलाई स्विकार्दै आगामी दिनमा अझै बढी जिम्मेवार,सजग र सचेत हुने प्रयास गर्नेछु । आजपनि बिहान ७ बजेदेखि साझ ७ बजेसम्म स्टुडियो भित्र थिए । काम बाट ब्रेक लिएर आजपनि साथीहरूसँगै खाना खाएको छु, तर भोज वा पार्टी गरेको छैन, होइन । धन्यवाद !